Madaxweyne Obama Oo Ka Waramay Dhibaatada Ka Qabsatay Kaadhadhka Lacagta Ee (Credit Card) | Hawraar
October 20, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Madaxweyne Obama Oo Ka Waramay Dhibaatada Ka Qabsatay Kaadhadhka Lacagta Ee (Credit Card)
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa jimcihii ka hadlay, xaalado dhibaato ku noqday, oo uu kala kulmay, kaararka lacagta ee Credit Card-ka loo yaqaano, kuwaas oo uu ka waramayay, sida aanay ku talo gal iyo damaanad buuxda oo la isku halayn karo aanay u lahayn aaladuhu.
Obama oo warkiisan ay baahisay jariirada Washington Post, ayaa ka waramay in tiraba labo jeer oo kala duwan, kaadhadhkiisu dafireen, isaga oo xusay in mar labo kaar oo mid walba lacagi ugu jirtay, laga waayay isna uu u qaatay in la xaday.
Sida Obama muuqaalka Washington Post, ku baahisay bogeeda Internet-ka uu ku sheegay, mar uu bishii hore ee September ku sugnaa, magaalada New York, oo uu hudheel ku yaala halkaas ka cunteeyay, ayaa sida uu xusay waxa dafiray, labadiisi kaar, kuwaas oo marna shaqayn waaya, marna inaan lacagi ku jirin sheega.
Obama ayaa sheegay in wakhtigaas, xaaskiisa oo kaarkeedu shaqeeyay furatay, oo lacagtii ka bixisay, isna xaaladu jiq ku noqotay, oo uu la yaabay sababta lacagtiisi ugu jirtay uu mar kaliya uga waayay, isagoo xysay in lacag ilaa sideed kun ku dhow uu ku ogaa wixii ka horeeyay hudheelkan intaanu u cunto doonan.
Obama oo la hadlayay guddoomiyaha bangiga dhexe ee dawlada Maraykanka oo ayaa sheegay, in damaanad kaararka lacagtu aanay ahayn, mid la isku halayn karo, qof kasta oo Maraykan ahna, ogyahay ilaa xad in dhibaatooyin tiro badan uu kala kulmo.
Sida Washington Post ku warantay, Madaxweyne Obama ayaa inta badan Mushaharkiisa loogu shubaa, kaarkiisa, (Credit Card-ka), waxaanu u isticmaala inuu kaga soo adeegto suuqyada, gaar ahaan wakhtiyada uu safarka ugu baxo, meelo ka mid ah dalka Maraykanka, xiligaas oo isaga iyo xaaskiisu u baahdaan, cunto waayo? Marka Madaxweynuhu ka tago aqalka cad ee looga taliyo dalka Maraykanka, waxa uu ka cunteeyaa hudheelada, mana jirto meelo casuumado loogu sameeyo sidaa awgeed aad ayuu u isticmaala Credit Card-ka.